အောင်လံမြို့မြောက်ဘက်ကြို့ပင်ရွာနှင့် ဥယျာဉ်ကျေးရွာအကြားရှိ ရေဆုံးချောင်းအတွင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦး ချောင်းဖြတ်ကူးစဉ် မျောပါပျောက်ဆုံးနေ - Yangon Media Group
အောင်လံမြို့မြောက်ဘက်ကြို့ပင်ရွာနှင့် ဥယျာဉ်ကျေးရွာအကြားရှိ ရေဆုံးချောင်းအတွင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦး ချောင်းဖြတ်ကူးစဉ် မျောပါပျောက်ဆုံးနေ
အောင်လံ၊ ဩဂုတ် ၂၆ – မကွေး တိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့ မြောက် ဘက် ကြို့ပင်ရွာနှင့်ဥယျာဉ်ကျေး ရွာအကြားရှိ ရေဆုံးချောင်းအတွင်း ဩဂုတ် ၂၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီ ခွဲက အမျိုးသမီးတစ်ဦး ချောင်း ဖြတ်ကူးစဉ် မျောပါပျောက်ဆုံးနေ ကြောင်း သိရသည်။
]]မနေ့က ညနေမှာ အရှေ့ ချောင်းဖျားမှာ မိုးတွေအရမ်းများပြီး ချောင်းရေအရမ်းလာနေတာပါ။ အောင်လံက ဈေးဝယ်ပြီး ပြန် လာတဲ့ ကြို့ပင်ကျေးရွာ သားအမိ နှစ်ယောက် ချောင်းကို ဆိုင်ကယ် နှင့် အဖြတ်မှာ ချောင်းရေမိပြီး က လေးကိုတော့ ကယ်လိုက်နိုင်ပါ တယ်။ အမေကတော့ ဒီနေ့အထိ မတွေ့သေးပါဘူး}} ဟု စစ်အောင် အုပ်စုအုပ် ချုပ်ရေးမှူးဦးသောင်း စိုးဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ရေဆုံးချောင်းမှာ အောင်လံမြို့နယ် စစ်အောင်အုပ် စု ကြို့ပင်ကျေးရွာနှင့် ဥယျာဉ်ကျေး ရွာအကြား ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေ သော ချောင်းဖြစ်ကာ ဩဂုတ် ၂၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီခွဲက ကြို့ပင် ကျေးရွာမှ မ—– (၃၀) နှစ်နှင့် သမီး ဖြစ်သူ မ—(၁၅) နှစ်တို့မှာ အောင်လံ မြို့မဈေးကြီးမှ ဈေးဝယ်ပြန်လာ ပြီး ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ချောင်းအတွင်း ဖြတ်သန်းစဉ် ချောင်းအတွင်း ချောင်း ဖျား၌ မိုးများကာ ချောင်းရေများ မြင့် တက်လာသဖြင့် ချောင်းအတွင်း မျောပါခဲ့ရာ သမီးဖြစ်သူကို အနီး နေသူများမှ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဆိုင်ကယ်မှာ တင်ကျန်၍ မိခင် ဖြစ်သူ မဇာဇာမှာ ချောင်းအတွင်း မျောပါသွားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်ကို ကျေးရွာစု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အချိန်မီ ကယ် ဆယ်နိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်အုပ် ချုပ်ရေးမှူထံ ဆက်သွယ်ပြီး မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ မြို့နယ်မီး သတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာပြည် သူများဖြင့် ချောင်းအတွင်း ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ် ဆောင်ခဲ့ရာ ဧရာဝတီမြစ်ထွက် ပေါက်အထိ ရှာဖွေသော်လည်း မ တွေ့ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အတန်းများတိုးလာခြင်းနှင့် ကျောင်းအဆင့်တိုးများ များပြားလာခြင်းကြောင့် ဆရာ၊ ဆရာမ လိုအပ်ချက်ကြီးမားလာ
ရှမ်းအရှေ့၌ ငါးနှစ်အောက်ကလေး ခုနစ်သောင်းကျော်ကို ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး အပိုဆောင်းတိုက်ကျွေးမည်
ဖုယွင်စက်ရုံ သပိတ်မှောက် လုပ်သားများ နိုဝင်ဘာ ၆ လုပ်ငန်းခွင် ပြန်ဝင်ခွင့်ရပြီ
ဆွံ့အသူများ ဆုတောင်းပြည့်သည့် စစ်ကိုင်းမြို့ အဘယစေတီတော် ကြာသင်္ကန်း ကပ်လှူ လှည့်လည်ပွဲ ကျင??
ဝါရင့် သရုပ်ဆောင်များစွာ ပါဝင်ထားသော ‘မယားကြောက်ရွာ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို နိုဝင်ဘာလတွင်
မုံရွာမြို့ ထန်းတော ညောင်ကိုင်းအင်း ပတ်လမ်းတွင် ထင်းရှာရာမှ သေနတ်ကျည် ဆန်ဟောင်းများ ထောင်??